Kwiimeko ezintsha ze-COVID-19 ezantsi, iBali inokuphinda ivuleke kubakhenkethi bamanye amazwe ngo-Okthobha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo » Kwiimeko ezintsha ze-COVID-19 ezantsi, iBali inokuphinda ivuleke kubakhenkethi bamanye amazwe ngo-Okthobha
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Umphathiswa wezempilo e-Indonesia u-Budi Gunadi Sadikin uthe ukuvulwa kwakhona kwabantu bamanye amazwe kuxhomekeke kwi-70% yabantu ekujoliswe kubo abafumana i-COVID-19 yabo yokuqala.
I-Indonesia ihamba ngononophelo ivula imida yayo kubakhenkethi bamanye amazwe emva kwengozi yesibini yesibini ye-COVID.
Abandwendweli bamanye amazwe bam bavunyelwe ukuba batyelele kwisiqithi esithandwayo saseBali nakwezinye iindawo zabakhenkethi.
Ukongezwa kwe-Indonesia kwamatyala e-COVID-19 aqinisekisiweyo kwehle nge-94.5% ukusukela kwincopho phakathi kuJulayi
Umphathiswa woLungelelwaniso wase-Indonesia kwimicimbi yezaselwandle kunye notyalo mali, u-Luhut Pandjaitan, ubhengeze ukuba ilizwe lase mpuma ye-Asiya lingavumela abatyeleli bamanye amazwe ukuba babuyele kweli lizwe ngo-Okthobha.
Indoneshiya Ihamba ngononophelo ivula imida yayo emva kwethambeka lesibini le-COVID-19 wave, evuthwe yi-Delta eyahlukileyo yintsholongwane.
Kodwa emva kwesilayidi esibukhali kumatyala e-COVID-19, abakhenkethi bamanye amazwe banokuphinda bakwazi ukuya kwisiqithi esidumileyo seholide Bali kunye nezinye iindawo zaseIndonesia ezaziwa kakhulu ziindwendwe zaphesheya.
Ngokwomphathiswa, ukongezwa kwamatyala aqinisekisiweyo e-COVID-19 kwehle nge-94.5% ukusukela kwincopho phakathi kuJulayi.
"Siyavuya namhlanje ukuba inqanaba lokuzala lingaphantsi kwe-1 ... Lilelona lisezantsi ngexesha lobhubhane kwaye libonisa ukuba ubhubhane uphantsi kolawulo," utshilo uLuhut.
Ezinye iimpawu ezintle zibandakanya inqanaba lokulala esibhedlele kuzwelonke eliwe phantsi kwe-15%, ngelixa inqanaba lokuzithemba, okanye inani labantu abavavanyiweyo abanesifo, belingaphantsi kwe-5%, utshilo umphathiswa.
U-Luhut uthe ukuba imeko namhlanje iyaqhubeka "siqinisekile" ukuba iBali inokuphinda ivulwe ngo-Okthobha.
Kwangoko kule veki, umphathiswa wezempilo e-Indonesia u-Budi Gunadi Sadikin wathi ukuvulwa kwakhona kwabantu bamanye amazwe kuxhomekeke kwi-70% yabantu ekujoliswe kubo abafumana i-COVID-19 yabo yokuqala.